Ụbọchị My Pet » 5 Echiche na-agbanwe Romance
emelitere ikpeazụ: Ka. 27 2020 | 3 min agụ
New mmekọrịta bụ mgbe niile na-akpali akpali, fun, na omiiko. Ma ọtụtụ ahụmahụ a fading nke romance na ahuhu ka oge na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe ịrịba ama n'oge, mgbe ahụ ebe a bụ ihe ise ị pụrụ ime iji perk ahụ romance na ịdị na-agbanwe na ebua:
1. Nzuzo edeturu
Gbalịa na-ahapụ obere ịhụnanya ndetu na-atụghị anya ebe onye gị na-ahụ na random oge nile ya ma ọ bụ ya ụbọchị. Idebe ozi na onye gị na si akpa tupu ha gaba si arụ ọrụ, ọ ga-brighten ha ụbọchị ọrụ na-eme ka ha na-atụ anya ịhụ gị mgbe ọrụ. Tinye a obere ịhụnanya leta ha ibu tupu ha ahapụ maka njem, ka ha mata na ị ga-atụ uche ha na ike na-eche ha ruo mgbe ha alaghachi n'ụlọ. Dee 'hụrụ m gị n'anya’ ma ọ bụ ise a obi uzuoku na ime ụlọ ịwụ mirror maka oge ọzọ onye gị na-ewe a ịsa. PIN a dee na windshield nke onye ị hụrụ n'anya si ụgbọ ala maka oge ọzọ ha nwere na-agba ọsọ ozi.
Aga mmezi mile site subtly echetara gị ịrịba ama ndị ọzọ mere ha ji dị ịrịba ama gị pụrụ ịbụ nnukwu enyemaka mgbe na-agbalị wughachi romance na mmekọrịta gị. Ị ga-bụghị naanị ka onye nke ọzọ maara na ị na-eche echiche banyere ha, ma ị ga-anọ na ha na-eche ofụri ụbọchị dị ka ụbọchị ọma.
2. Get More Nkịtị
Cheta na mmalite nke mmekọrịta gị? Ohere inweta bụ na gị na onye òtù ọlụlụ bụ nile ọ bụla ọzọ, na-ejide aka mgbe ọ bụla oge, sị ogologo, omiiko goodbyes na njedebe nke a ụbọchị, na-amakụ ọ bụla ọzọ na ohere ọ bụla. Ịtụte ochie ụbọchị site na-echefu ihe ịhụnanya onye gị na. Iru si ma jide aka na onye gị na dị ka ị na-eje ije n'okporo ámá, egwu footsies n'okpuru tebụl nri abalị, na-enye onye ị hụrụ n'anya a ogologo nsusu Nana na njedebe nke gị ụbọchị.
Na-echefu ihe ahụ nwere ike na-enyere ịtụte romance na anọwo na-ebelata. Ohere inweta bụ, onye gị na ga bulie gị mgbaàmà na-anabata n'aka na mmetụta ịhụnanya na romance.
3. Nọgidenụ Na-a Njem abụọ
Ọ dị mfe ka ndụ kwa ụbọchị ga-esi na ụzọ a banye ná mmekọrịta ịhụnanya. Mgbe ụfọdụ, ị n'eziokwu-eche dị ka ị na-adịghị oge maka romance. A oké ụzọ na-esi pụọ ya niile na-elekwasị anya na iwughachi ị mmekọrịta bụ site na-ewere a njem ọnụ. Kwadebe a ezumike ma ọ bụ ná ngwụsị izu getaway (dabere na ole oge ị nwere ihapu) nke na-agụnye a otutu onwe ntụrụndụ oge na otu na otu na mmekọrịta. Ikekwe a izu ụka na a spa ma ọ bụ a n'izu na a okpomọkụ agwaetiti ga-eme atọ.
Ọ bụrụ na ụbọchị ndụ na-adọpụ uche gị pụọ onye gị na, gbapụ ihe ndọpụ uche site n'ụzọ nkịtị na-pụọ na ya niile. Ọ nwere ike na-eme ka mmekọrịta gị a ụwa nke ọma, na-zuru na unu abụọ. Ị ga-anọ oge lekwasịrị anya onye ọ bụla ọzọ, bụghị lekwasịrị anya na-arụ ọrụ, akwụkwọ, ma ọ bụ ezinụlọ mbipụta.
4. Nye a Onyinye
Cheta, dị nnọọ n'ihi na ị snagged gị Ihọd ma ọ bụ nwa agbọghọ, apụtaghị na ị nwere ike ịkwụsị wooing ya ma ọ bụ ya. Ụfọdụ ndị ikom na ndị inyom na mkpa ka a na-romanced na a mmekọrịta iji na-enwe hụrụ n'anya na chọrọ. Mee ka gị na onye òtù ọlụlụ na-echeta gị mbedo ụbọchị site n'inye ya ma ọ bụ ya na onyinye nke ekele. Onyinye na-adịghị na-esi ọtụtụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ego maka ya. A chocolate bilie, a obere obere trinket, ma ọ bụ a CD mere nke ọkacha mmasị gị ịhụnanya songs nwere ike ime atọ.
N'ezie a mmekọrịta siri ike na-aga karịrị ihe onwunwe ihe na onyinye, ma, ma ọ bụrụ na romance bụ ihe ị na-achọ ka e wughachi, a onyinye nwere ike ịbụ ihe dị gị mkpa iji nweta ndị lovey dovey obi na-eru ọzọ. Unu chere ruo mgbe otu ncheta ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ ma. A onyinye n'ihi na ọ dịghị ihe doro anya kpatara ngwugwu ọzọ nke mmetụta karịa ihe tụrụ anya na onyinye.
5. Uyomima Ọzọ
Emela, Adịghị m pụtara-apụ ma na-ahụ onye ọhụrụ. Echere m, na-onye ị hụrụ n'anya si na ụbọchị ọzọ. Di na nwunye na ndidi na a mmekọrịta ruo nnọọ ogologo oge, karịsịa ndị na-ebi ndụ ọnụ, mgbe echefu banyere otú fun ụbọchị nwere ike ịbụ. Ha ga-esi n'ime a rut nke na-eme ha nkịtị ihe n na-aga ha ahụkarị ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka nri abalị, ịgbaziri fim, ma ọ bụ na-aga n'ihi na ice ude n ma eledala ike nke a n'ezie ụbọchị mgbe na-agbalị reignite romance.
Ná mmalite a mmekọrịta, Ọtụtụ di na nwunye na-enwe mmasị na-apụ ma na-eme ihe ọhụrụ ọnụ. Ọ bụ fun na-akpali akpali na-aga na ụbọchị n'ebe na ị bụghị ọnụ. Gbalịa na-eme nke a ọzọ. Ọ bụghị nanị na ga na-aga na ụbọchị ọhụrụ ebe na fun eme ọnụ aka wughachi romance, ọ ga-enyere ike ọhụrụ kwesịrị ncheta ugboro ọnụ agachi banyere mgbe e mesịrị.
Cheta, mmekọrịta mkpa ka a na-elekọta ma na-aga iji na-romance ndụ ma na-eme ihe iche iche. Ise a Atụmatụ nwere ike inyere gị ebua ndị ịhụnanya ndọrọ mmekọahụ ọzọ, ma nọgide na-anya ka gị na onye òtù ọlụlụ na ịbụ maara nke ọnọdụ gị mmekọrịta bụla e nyere n'oge dị mkpa iji na-ndị na-ekpo ọkụ na-ere ọkụ n'ime obi gị na onye gị na.
Atụmatụ na iji Ghọọ a chick Igwe Ọdụdọ
Gwa gị Ịhụnanya gị enweghị Words
E dị otú ahụ ka A Good Ọgụ Na Relationships?